तपाईंको बाल गरेको प्रशिक्षण शैली कसरी निर्धारण गर्न
सिक्ने शैलीहरू बच्चाहरु सिक्न कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न र शिक्षकहरू कसरी सिकाउन. पूर्वप्राथमिक-वृद्ध र तल भएका विशेष गरी ती - - छोराछोरी भएकोले आमाबाबुको द्वारा मुख्यतया सिकाइएको, यसलाई हामी सक्छौँ हाम्रो छोराछोरीको सिक्ने शैलीहरू बारेमा धेरै थाहा महत्त्वपूर्ण पनि छ.
ओक्सफोर्ड सन्दर्भ वेबसाइट अनुसार, सिक्ने शैलीहरू उल्लेख "व्यक्तिहरूलाई सिक्ने मा संलग्न जो विशेष तरिकामा।"
सिक्ने शैलीहरू पनि ओभरल्याप गार्डनर गरेको धेरै intelligences. कसैको सिक्ने शैली निर्धारण पनि सबै उमेरका मेरो विद्यार्थी तिनीहरूले आक्रमण र कसरी राम्रो अवधारणा लागि पाठ 'Hack' हुनेछ निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ। "
आफ्नो बच्चाको सिक्ने शैली पत्ता
धेरै मानिसहरू लाग्छ सक्छ विपरीत, एक बच्चाको सिक्ने शैली निर्धारण गर्न एक प्रमाणित शिक्षक वा प्रशिक्षित पेशेवर हुन आवश्यक छैन.
संचार महत्वपूर्ण छ, तपाईं अभिभावक वा बच्चा को शिक्षक हो बिना यदि.
यसरी, यसलाई आमाबाबुले छोराछोरीलाई समय बिताउन महत्त्वपूर्ण छ, र धेरै तिनीहरूले गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई चिन्न.
सबै भन्दा राम्रो कुरा अभिभावक गर्न सक्नुहुन्छ सिक्ने बारेमा शिक्षामा पछिल्लो पछि छोडेर बच्चा ध्यान केन्द्रित छ.
"आमाबाबु एक बच्चा एक डेस्क बसिरहेको पर्छ भनेर एक preconceived धारणा सामान्यतया छ, शान्त, रूप संगीत, आदि. [सिक्न गर्न]. यो सिक्ने लागि मात्र वातावरण छैन र तपाईं मात्र यदि तपाईं राम्रो उहाँलाई थाहा आफ्नो बच्चाहरु संग के काम गर्दछ जान्दछन् हुनेछ। "
बच्चाको सिक्ने शैली निर्धारण को थोक अवलोकन मा साँच्चै.
जस्तै, यदि तपाईं एउटा चलचित्र हेर्न, तपाईं प्रतीक्षा र एनिमेशन र रेखाचित्र शैली याद कसले हेर्न सक्छ (दृश्य स्मार्ट), जसले ध्वनि सम्झना (श्रवण स्मार्ट), र कसले सबैभन्दा भावना र नैतिकता प्रभावित छ (intrapersonal स्मार्ट)! परिणाम लगभग सधैं लगातार छ!
साथै, I believe that all kids are tactile learners. बच्चाहरू तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले सिक्न लागि छुन र क्रममा पकड ठोस सामाग्री छ छ, त्यसैले माटो कुरा, manipulatives, आदि. वास्तवमा, सिक्ने शैलीहरू सामान्यतया दुई शैलीहरू संयोजन मा आउनुहोस्। "
यहाँ तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरू छन्:
1. आफ्नो बच्चा चिन्न
तपाईं आफ्नो बच्चाको सिक्ने शैली निर्धारण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं उहाँलाई साँच्चै चिन्न आवश्यक.
उहाँले हेर्छ के चासो लिनुहोस्, सुन्नुहुन्छ, and reads. Talk to him about his friends, उहाँले जाँदै मनपर्यो स्थानहरुमा, आदि. के तपाईं प्राप्त जानकारी मा हैरानी हुने छौं - प्लस सम्बन्ध गाँसिसकेको कि तपाईं नजिक बनाउनेछ.
केही मानिसहरू बच्चाहरु तीन वा चार आधारभूत सिक्ने शैलीहरू मात्र एक बाहिर छ सक्छ भनेर भन्न सक्छ तापनि (दृश्य वा छवि-स्मार्ट, श्रवण वा शब्द-स्मार्ट, ट्याक्टायल / kinesthetic वा शरीर-स्मार्ट, तार्किक वा संख्या-स्मार्ट), सत्य छोराछोरीलाई शैलीहरू संयोजन हुन सक्छ भन्ने छ.
कहिलेकाहीं बच्चाहरु माथि शैलीहरू तिनीहरूले सिक्ने हुनुहुन्छ के अनुसार मिश्रण. तिनीहरूले केही कुराहरू लागि श्रवण र अरूलाई दृश्य हुन सक्छ, वा दुवै.
2. बनाउन आफ्नो बच्चाको सिक्ने शैली बाहिर सबैभन्दा
आफ्नो बच्चा काम कसरी देख्नुहुन्छ हेर्न एकपटक, र के उहाँको वरिपरि मा गइरहेको बुझ्नुहुन्छ, तपाईं सिक्ने लागि शारीरिक र अस्थायी वातावरण तय गरेर यसलाई पूरक सक्छ. जस्तै, तपाईं आफ्नो बच्चाहरु को राम्रो तरिकाले संगीत संग काम गर्दछ नोटिस, किन उहाँलाई earphones संग अध्ययन गर्न अनुमति (तपाईं शान्त घर चाहनुहुन्छ भने, छ).
यहाँ शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार अन्तरक्रिया कसरी एउटा उदाहरण हो:
लागि दृश्य शिक्षार्थी, हरेक उत्पादन सधैं एउटा दृष्टान्त संग आउने. स्पष्टीकरण रेखाचित्र रूप मा प्रस्तुत हुनेछ.
लागि श्रवण शिक्षार्थी, तिनीहरूले पाठ संग जोडिएको गीतहरू फेला थियो. YoutTube त्यसपछि आफ्नो परिवारको लागि ठूलो स्रोत थियो.
लागि भावनात्मक शिक्षार्थी, उनको असर गर्न अवधारणा अपील थियो भनेर हरेक पाठ नैतिक कथा हुनेछ.
3. तदनुसार समायोजन
तपाईं जो सिक्ने शैली आफ्नो बच्चा छ परीक्षण गर्न छ किनभने यो लामो प्रक्रिया हुन सक्छ. यो सुरुमा परीक्षण र त्रुटि हुनेछ.
आफ्नो बच्चा बढ्दै जाँदा, उनको सिक्ने शैली पनि परिवर्तन, त्यसैले तपाईं पनि शिक्षा / पढाउने शैली परिवर्तन गर्न खुला हुनुपर्छ.
4. कदर गर्छौं (र प्रयोग) अन्य शैलीहरू
अन्य सिक्ने शैलीहरू अन्वेषण गर्न नडराऊ, तपाईंले पहिले नै आफ्नो छोराछोरीको अद्वितीय शैली पहिचान गरेको छ भने पनि.
बच्चाको सिक्ने शैली थाह भएकोले कम से कम रुचि विधि अन्वेषण देखि एक अभिभावक रोकिनु हुँदैन. त्यो अब सुधार को लागि आफ्नो कोठा हुन्छ, त्यसैले सबै शैलीहरू एक थप समग्र सिक्ने लागि उपयोग गर्न सकिन्छ.
सुखी बच्चाहरु, तपाईं सुखी
अन्ततः, आफ्नो बच्चाको सिक्ने शैली थाह पक्कै केवल तपाईं लाभदायक हुन सक्छ, आमाबाबुले, तर तिनलाई साथै गर्न. यो बाटो, सिक्ने एक पुरा धेरै सजिलो हुन्छ - जो आनन्दित छोराछोरी र सुखी आमाबाबुको लागि बनाउँछ.